LED ပြောင်းဖူးမီးသီး, LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း, ပန်းကန်ပြားပျံနဲ့ LED မြင့်မားသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း - Sansun
ခေါ်ရန်ပံ့ပိုးမှု +86 152 2012 8160
30W-200W LED ကိုပြောင်းဖူးမီးသီး
PC ကိုဖုံးနှင့်အတူ LED ပြောင်းဖူးမီးသီး
ရေစိုခံ LED ကိုပြောင်းဖူးမီးသီး
ပန်းကန်ပြားပျံနဲ့ LED မြင့်မားသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလင်း
LED အမှတ်တရ Pack ကိုအလင်း
LED ကို Linear အလင်း
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED ကိုမြှောင်အလင်း
3535 နဲ့ LED Linear အလင်း
ကျနော်တို့ Professional က Lighting Solutions & OEM န်ဆောင်မှုများဝေငှ
2013 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကတည်းက Sansun Opto အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှဖွံ့ဖြိုးဆဲ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ရောင်းအတွက်အထူးပြုထားပြီးမီးခွက် LED ။ လိမ္မော်ရောင် & OEM န်ဆောင်မှုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ "အရည်အသွေးပထမဦးစွာ" ၏နိယာမအပေါ်အခွခေံကျနော်တို့အမေရိကန်, ဥရောပနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏အဖိုးတန် client များအကြားမြင့်မားတဲ့ဂုဏ်သတင်း .Our အဓိကထုတ်ကုန်ပြောင်းဖူးမီးသီး, LED မီး Linear အလင်းများ, ပန်းကန်ပြားပျံနဲ့ LED မြင့်မားသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလင်းများ, LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်းများ LED နေကြသည်ဈေးကှကျအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ , LED ကိုပြောင်းဖူးမီးသီး, LED ကိုအမှတ်တရ Pack စသည်တို့ကို
10070 နဲ့ LED Linear အလင်း
5075 နဲ့ LED Linear အလင်း
100W LED ကိုအမှတ်တရ Pack ကိုအလင်းအပြည့်အဝ-cutoff စတိုင်
25W LED ကိုအမှတ်တရ Pack ကိုအလင်းအပြည့်အဝ-cutoff စတိုင်
100W LED ကိုအမှတ်တရ Pack ကိုအလင်း Semi-cutoff စတိုင်ညနေစောင်း ...
30W LED ကိုအမှတ်တရ Pack ကိုအလင်း Semi-cutoff စတိုင်ညနေစောင်း ...
LED ပြောင်းဖူးမီးသီးအလင်းကိုအရင်းအမြစ်လူတန်းစားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် LED မီးခှကျတစျမြိုး, ဖြစ်ပြီး, 360 ဒီဂရီရောင်ခြည်ထောင့်နှင့်အတူ။ က LED ကိုပြောင်းဖူးဆီမီးခွက်ကိုခေါ်မယ့်ဒါသည်၎င်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ဆီမီးခွက်ပုတီးဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ပြောင်းဖူး COB ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ (Sansun 30W LED ကိုပြောင်းဖူးမီးသီး) ကပြောင်းဖူးမီးသီးမီးခွက်သည်ခန္ဓာကိုယ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အဘို့သင့်လျော်သည် Features ...
အသိဉာဏ်အလင်းမြန်နှုန်းမြင့်အောင် De ဝင်ရောက်လာ ...
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, Smart အလင်းရောင် "အသေးစားနှင့်အသံ" ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကယ့်ကိုပြန့်နှံ့မထားပါဘူး။ 2017, ဒီအခြေအနေကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီနှင့်အသိဉာဏ်အလင်းရောင် "နွေးခြင်းနှင့်ပူမဟုတ်" မရှိတော့သည်နှင့်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတစ်ဦးစင်မြင့်သို့ ဝင်. သိရသည်။ LEDInside မှနောက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ t ...
အဘယ်အရာကိုအလင်းကိုထုတ်ယူ ef ထိခိုက်နေသည် ...
LED ကိုစတုတ္ထမျိုးဆက် illumination အရင်းအမြစ်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်အလင်းအရင်းအမြစ်ဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာစွမ်းအင်ချွေတာရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ရှည်သောအသက်နှင့်အသေးစားအရွယ်အစား၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့အရိပ်အယောင်, Display, အလှဆင်, နောက်ခံအလင်း, ယေဘုယျ illumination နှင့်မြို့ပြ ni အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုပါသည် ...
Adress: 3F, BuildingA, Jiutai စက်မှုလုပ်ငန်းပန်းခြံ, Shuitian, Shiyan မြို့, Bao'an ခရိုင်, ရှန်ကျန်း
E-mail ကို: info@sansun-light.com
ဖက်စ်: +86 755 3695 1467
Skype ကို: +86 137 1460 3549